Mac Forever တွင် Apps များကို Uninstall လုပ်နည်း မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Mac တွင် အက်ပ်များကို အပြီးတိုင် ဖယ်ရှားနည်း
ဒန်နီရယ် Terrasa | 12/04/2022 09:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 12/04/2022 16:59 | မက်, လည်ပတ်မှုစနစ်များ
Mac တွင် အပလီကေးရှင်းအသစ်များကို ထည့်သွင်းခြင်းသည် ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူအသစ်များပင်လျှင် ပြဿနာမရှိဘဲ ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် အနည်းငယ်ပို၍ပင်ပန်း သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ Mac အက်ပ်များကို ဖြုတ်ပါ။ (သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်နှင့် အခြားကိရိယာများ)၊ အထူးသဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၎င်းတို့ကို သဲလွန်စမချန်ဘဲ အပြီးတိုင်ဖျက်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိနေသရွေ့တော့ သိပ်တော့မခက်ပါဘူး။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြပါမည်။
macOS ရှိ အပလီကေးရှင်းများ သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်များကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် များစွာသော ရှုပ်ထွေးမှုများ မရှိပါ။ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ လျင်မြန်စွာနှင့်သန့်ရှင်းThird-party ပရိုဂရမ်များကို အပန်းဖြေရန် မလိုအပ်ဘဲ၊ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင် အကြွင်းအကျန်မကျန်တော့ဘဲ၊ ၎င်းတို့ကို "ရှင်းပစ်ရန်" အတွက် တာဝန်ရှိသော စနစ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောကိစ္စရပ်များအတွက်၊ အက်ပလီကေးရှင်းများကိုဖယ်ရှားရန် သီးခြားအက်ပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို နောက်ဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ် အမြဲသုံးနိုင်သည်။
ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ- Mac အတွက်အကောင်းဆုံးနောက်ခံပုံများကိုဘယ်မှာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရမည်နည်း။
1 Mac အက်ပ်များကို ဖယ်ရှားရန် ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်း
2 Mac အက်ပ်များကို ဖြုတ်ရန် ပြင်ပအက်ပ်များ
Mac အက်ပ်များကို ဖယ်ရှားရန် ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်း
သင့် Mac တွင် အသုံးမပြုတော့သည့် သို့မဟုတ် သင်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့သော အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိပါက ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုဖယ်ရှားရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည် အဆိုပါ launchpad ကနေ. စနစ်သည် ပိုမိုရိုးရှင်း၍ မရနိုင်ပါ- အပလီကေးရှင်းအိုင်ကွန်ကို အမှိုက်ပုံးသို့ ဆွဲယူရုံသာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို မှန်အောင်လုပ်ဖို့၊ သင်ဖယ်ရှားလိုတဲ့ app ကို အရင်ဆုံးရွေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဤအရာများသည် လိုက်နာရန် အဆင့်များဖြစ်သည်-
ပထမဆုံးအနေနဲ့ သွားရမှာ Launchpad ။
ထို့နောက် ဖျက်ပစ်ရန် အပလီကေးရှင်းကို ဆက်လက်နှိပ်ရပါမည်။
ပြီးရင်a'X' ကို မီးမှိတ်တုတ်ပြနေသည်. ၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် အပလီကေးရှင်းကို ဖျက်ပစ်မည် (သက်ဆိုင်ရာ အတည်ပြုချက် မက်ဆေ့ချ်မတိုင်မီ ကျွန်ုပ်တို့သည် အက်ပ်ကို ဖျက်ရန်သေချာမှုရှိမရှိ မေးမြန်းခြင်း ပေါ်လာပါမည်)။
သို့သော်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပရိုဂရမ်ကိုဖျက်ရန် "X" သည် လုံးဝပေါ်မလာကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိရပါသည်။ ဒီလိုဖြစ်လိုက်တာ မှန်ကန်သောကိရိယာများ မရှိပါ။ Launchpad တွင် ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ရန်၊ များသောအားဖြင့် Mac App Store မှ တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုဒ်မလုပ်ရသေးသော အရာများဖြစ်သည်။ ဒီလိုကိစ္စတွေမှာ ဘာလုပ်ရမလဲ။
အထိရောက်ဆုံးနှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဖြေရှင်းချက်မှာ အပလီကေးရှင်းအိုင်ကွန်ကို တိုက်ရိုက်ရှာရန် Launchpad မှ ထွက်ရန်ဖြစ်သည်။ Finder မှ ( Finder ဝင်းဒိုးမှ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ၎င်းကိုဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ Applications ဖိုဒါ) ထို့နောက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အိုင်ကွန်ကို recycle bin သို့ ဆွဲယူနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် မေးခွန်းထုတ်ထားသော အပလီကေးရှင်းကို Mac နှင့် Launchpad မှ အလိုအလျောက် ဖျက်ပစ်မည်ဖြစ်သည်။
Mac အက်ပ်များကို ဖြုတ်ရန် ပြင်ပအက်ပ်များ
အထက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းသည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီး Mac အသုံးပြုသူအများစုတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေပါသည်။သို့သော်လည်း၊ အသုံးပြုလိုသူများရှိပါသည်။ ပြင်ပ application များ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ရန်၊ ၎င်းကို Mac App Store တွင်ရော ၎င်းနှင့် ပြင်ပတွင်ပါ ရှာဖွေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည့်ရလဒ်သည် အတူတူပင်ဖြစ်သောကြောင့် တစ်ခု သို့မဟုတ် အခြားရွေးချယ်မှုတစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ရိုးရှင်းသောအရသာဖြစ်သည်။ ဤအရာများသည် အထိရောက်ဆုံးအက်ပ်များထဲမှ အချို့ဖြစ်သည်-
Mac အက်ပ်များကို AppCleaner ဖြင့် ဖြုတ်ပါ။
AppCleaner ၎င်းသည် Mac အသုံးပြုသူများအတွက် လူသိများသော application တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်းကိုတရားဝင် Apple အက်ပ်စတိုးတွင် မရရှိနိုင်ပါ။ သင် ၎င်းကို ဝဘ်မှဒေါင်းလုဒ်လုပ်သောအခါ၊ ၎င်းသည် သင့် Mac ၏ Applications ဖိုဒါတွင် ထည့်သွင်းမနေဘဲ ၎င်းကို သင်ကိုယ်တိုင် သိမ်းဆည်းရပါမည်။
၎င်း၏ interface သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး၎င်း၏အသုံးပြုမှုအလွန်လွယ်ကူသည်။ Mac အပလီကေးရှင်းများကို AppCleaner ဖြင့် ဖြုတ်ရန်၊ သင်သည် Mac တွင် ထည့်သွင်းထားသည့် အပလီကေးရှင်းများစာရင်းကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်သာ လိုအပ်သည် (၎င်းကိုကြည့်ရှုရန်၊ မျက်နှာပြင်၏ ညာဘက်အပေါ်ဘက်ခလုတ်ကို နှိပ်ရန် လိုအပ်သည်) နှင့် သင်ဖျက်လိုသော အရာများကို ရွေးချယ်ပါ။
AppZapper ဖြင့် Mac အက်ပ်များကို ဖြုတ်ပါ။
၎င်းသည် Apple Store ရှိ အပလီကေးရှင်းများစာရင်း အပြင်တွင်လည်း AppCleaner နှင့် အလွန်ဆင်တူသော အက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းတွင် ထင်ရှားသော ခြားနားချက်အချို့ရှိသည်။
အင်တာဖေ့စ်မှာ အမှန်ပါပဲ။ AppZapper ၎င်းသည် အနည်းငယ် ခေတ်နောက်ကျနေပြီး များစွာယုံကြည်မှု မရှိသော်လည်း ၎င်းသည် အက်ပ်အား ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်မလုပ်ဟု မဆိုလိုပါ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ စနစ်သည် ပိုမိုရိုးရှင်း၍ မရနိုင်ပါ- အပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်သည့်အခါ သင်ဖျက်လိုသောအက်ပ်များကို ဆွဲယူရန် ကန့်သတ်နေရာလွတ်တစ်ခု ပေါ်လာပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အက်ပ်ကို ဖိုဒါအတွင်း ထားရှိသည့်အခါ၊ "Zap!" ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းကို အပြီးအပိုင် ဖြုတ်လိုက်ပါမည်။
CleanMyMac ဖြင့် Mac အက်ပ်များကို ဖြုတ်ပါ။
ဤအက်ပ်က ကတိပေးသည်- ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ကို ပြီးပြည့်စုံပြီး ထိရောက်စွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ ဤစာရင်းတွင်ပါရှိသော အခြားရွေးချယ်စရာများနှင့် မတူဘဲ၊ မင်္ဂလာပါ ၎င်းသည် အခကြေးငွေပေးချေသော်လည်း၊ လဲလှယ်ရာတွင် ၎င်းသည် အပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များစွာကို ပေးဆောင်ကာ၊ အားလုံးထက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ၏ မှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အာမခံချက်ဖြစ်သည်။
CleanMyMac ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ စတင်ရန်၊ သင်သည် အက်ပ်ကိုဖွင့်ပြီး ဘယ်ဘက်အောက်ပိုင်းမီနူးတွင် တွေ့ရှိသည့် "အသုံးဝင်မှုများ" ကဏ္ဍကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရပါမည်။ ပြီးသည်နှင့် "Uninstaller" ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင် ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသော အပလီကေးရှင်းများနှင့်အတူ စာရင်းတစ်ခု ပေါ်လာပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အပြီးအပိုင် ဖယ်ရှားလိုသော အရာကို ရွေးချယ်ပြီး “အပြီးသတ် ဖြုတ်ချခြင်း” ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါ။
ကျန်တာတွေအတွက် CleanMyMac က ရိုးရှင်းပြီး လှပတဲ့ အင်တာဖေ့စ်ကို ပေးထားပါတယ်။ အခပေး အက်ပ်တစ်ခု၊ သို့သော် အက်ပ်လီကေးရှင်းကို ဖယ်ရှားခြင်း ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုထက် များစွာပိုသော ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု- ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ကို သန့်ရှင်းစေပြီး ပုံသဏ္ဍာန်ကောင်းမွန်စေရန် ပြီးပြည့်စုံသော စနစ်တစ်ခု။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် CleanMyMac သည် မကြာသေးမီက Windows အတွက် ဗားရှင်းတစ်ခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး Microsoft လည်ပတ်မှုစနစ် တပ်ဆင်ထားသော ကွန်ပျူတာများ၏ အသုံးပြုသူများအတွက် ဤတူညီသော အားသာချက်များနှင့် အသုံးဝင်မှုများကို ပေးဆောင်ထားကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။
လင့်ခ်: My Mac ကိုသန့်ရှင်းပါ
AppDelete- Mac အက်ပ်လီကေးရှင်းများကို အလွယ်တကူ ဖြုတ်ပစ်ရန်
ဤစာရင်းတွင် Mac အက်ပ်များကို ဖယ်ရှားရန် အပြည့်စုံဆုံးအက်ပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ AppDelete အက်ပ်များကို ဖယ်ရှားရန်သာမက ဝစ်ဂျက်များ၊ စခရင်ခန်ဆာဗာများ၊ ဖိုင်များနှင့် အခြားအရာများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည့် uninstaller တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ကို သန့်ရှင်းပြီး ပြီးပြည့်စုံသော မဂ္ဂဇင်းအခြေအနေတွင် ထိန်းသိမ်းရန် ပြီးပြည့်စုံသောကိရိယာတစ်ခု။
AppDelete ၏အကျိုးကျေးဇူးများထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများအားဒုတိယအခွင့်အရေးပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မှားယွင်းသော အပလီကေးရှင်းတစ်ခုကို ဖျက်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်စေ ၎င်းကို ပြန်လည်ရယူလိုသည်ဟု မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ပြဿနာမရှိပါ- မတပ်ဆင်ထားသောအက်ပ်များကို အမှိုက်ပုံးသို့ ရွှေ့ထားသည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်စေရန် "Undo" ကိုနှိပ်ပါ။
ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ- Mac ပေါ်မှာလျှို့ဝှက်ဖိုင်တွေဘယ်လိုပြမလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လည်ပတ်မှုစနစ်များ » Mac တွင် အက်ပ်များကို အပြီးတိုင် ဖယ်ရှားနည်း
Google Chrome ကိုအဝေးမှအသုံးပြုနည်း
Minecraft တွင် အားနည်းချက်အား မည်ကဲ့သို့ရနိုင်သနည်း